Liverpool Oo U Baxday Figta Ugu Saraysa Horyaalka Ingiriiska Kadib Markay Garaacday Wolverhampton. – somalilandtoday.com
Liverpool Oo U Baxday Figta Ugu Saraysa Horyaalka Ingiriiska Kadib Markay Garaacday Wolverhampton.
(SLT-Livarpool)Liverpool ayaa guu muhiim ah ka soo gaadhay kooxda dhibta badan ee Wolves waxayna Reds sii joogtaysay rekoorka guuldaro la’aanta Premier league ee xil ciyaareedkan iyada oo 2-0 ku soo garaacday kooxda Wolves oo ay marti u ahayd.
Liverpool ayaa guushan ku soo gaadhay goolal ay kala dhaliyeen Mohamed Salah iyo Virgil Van Dijk waxayna guushani Liverpool ka caawisay in ay afar dhibcood ku sii qabtay hogaanka Premier league ka hor kulanka ay Man City ciyaari doonto.
Liverpool ayaa awooday in ay saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Wolves waxayna sidaa wali ku sii tahay kooxda aan soo guuldaraysan 18 kii kulan ee xili ciyaareedkan.
Kaydka: Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana, Xherdan Shaqiri, Daniel Sturridge, Divock Origi.
Kaydka: John Ruddy, Morgan Gibbs-White, Ruben Vinagre, Leander Dendoncker, Helder Costa, Ivan Cavaleiro, Leo Bonatini.
Kooxda Wolves ee xil ciyaareedkan xaaladaha ku soo xumaysay kooxaha waa wayn ee Premier league ayaa sidii la filiyay iska caabin xoogan kala hortimid Liverpool iyada oo waliba qaybtii hore ee ciyaarta walwal badan ku abuurtay jamaahiirta Liverpool iyo Jurgen Klopp.
Laakiin Liverpool ayaa khibrad ahaan ku dishay Wolves qaybtii hore ee ciyaarta iyada oo goolhaye Alisson uu door wayn ku lahaa in Liverpool aan qaybtii hore wax goolal ah laga dhalin wuxuuna Alisson joojiyay ilaa saddex fursadood oo cadaan ah oo ay ciyaartoyda Liverpool qaladaad xun soo sameeyeen.
Alisson ayaa asturay Fabinho, Keita iyo Milner oo qaladaad sameeyay kuwaas oo ay Wolves goolal ku dhalin karaysay laakiin Reds ayaa ahayd kooxda kalsoonida ugu badan ku ciyaaraysay iyada oo Salah, Firmino iyo Mane ay dhibaato badan ku abuurayeen difaaca Wolves.
Daqiiqadii 17 aad Mohamed Salah ayaa hal taabasho oo kaliya ku dhaliyay goolka furitaanka kooxdiisa ee kulankan kadib markii ay Sadio Mane iyo Fabinho oo caawintan sameeyay ay iskaga soo xirmeen dhinaca midig wuxuuna Salah sidaa ku dhaliyay goolkiisii 11 aad ee Premier league.
Liverpool ayaa markii ay goolka dhalisay culays badan kala kulantay Wolves oo isku dayday in ay jawaab bixiso laakiin goolhaye Alisson ayaa noqday ninka ay dhaafi waayeen ee hal bacaad lagu lisay ka dhigay fursado xataa si xun loogu qaldamay.
Qaybtii hore ee ciyaarta oo aan labada kooxood u sahlanayn ayaa lagu kala nastay 1-0 ay Liverpool hogaanka ciyaarta ku haysay Liverpool laakiin markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Wolves dagaal wayn ugu jirtay sidii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd.
Daqiiqadii 58 aad Liverpool ayay dhibaato dhaawac soo gaadhay waxaana ciyaarta dhaawac uga baxay Naby Keita waxaana kaydka laga soo kiciyay Adam Lallana iyada oo Reds doonaysay in ay la timaado goolka labaad si ay Wolves u aamusiiso.
Daqiiqadii 63 aad tababaraha Wolves ayaa laba isbadal oo isku mar ah shaxdiisa ku sameeyay wuxuuna ciyaarta soo galiyay M. Gibbs-White iyo Ivan Cavaleiro wuxuuna ciyaarta ka saaray xidigaha loo arkayay in ay Liverpool dhibaatada ku abuurayeen ee João Moutinho iyo Adama Traoré.
Daqiiqadii 68 aad Liverpool ayaa ugu danbayn heshay goolka muhiimada wayn u lahaa ee labaad kaas oo uu Van Dijk kooxdiisa kaga dul qaaday culayskii Wolves ka haystay isaga oo qaab fiican u dhamaystiray kubbad caawin uu Mohamed Salah sameeyay wuxuuna goolkani dhashay waqti yar kadib markii uu Lallana fursad dahabi ah qasaariyay.
Ciyaarta ayaa noqotay 2-0 ay Liverpool kalsooni buuxda ku heshay laakiin Wolves ayaa wali raadinaysay qaabkii ay ku dhaafi lahayd Alisson oo wali fursado fiican Wolves ka joojinayay laakiin Klopp ayaa daqiiqadii 76 aad ciyaarta soo galiyay Wijnaldum si uu khadka dhexe ugu xoojiyo wuxuuna saaray Roberto Firmino.
Daqiiqadii 87 aad Klopp ayaa ciyaarta soo galiyay Clyne wuxuuna saaray Sadio Mane isaga oo aan kulankan wax fursad ah u reebin Shaqiri oo wacdaro soo dhigay kulankii Man United laakiin daqiiqadii 89 aad Wolves ayaa heshay fursad gool cadaan ah loo fishay iyada oo Gibbs-White uu kubbad ku hor helay goolka Liverpool balse shabaqa banaanka ayuu si lama filaan ah ugu dhuftay kubbadii uu goolka ku dhalin lahaa.
Mohamed Salah ayaa lumiyay fursado aad u fiicnaa oo uu xataa saddexley goolal ah ku dhalin kari lahaa waxaana shaqo wayn qabtay difaaca Wolves iyo goolhayahooda kaas oo Salah fursado fiican ka joojiyay.
Intii lagu jiray waqtigii dheeriga ahaa Wijnaldum ayaa helay fursad cajiib ah kadib markii uu Mohamed Salah kubbada kaga soo guulaystay difaaca Wolves laakiin darbada Gini Wijnaldum ayaa birta goolka wax yar u martay waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 2-0 ay Liverpool guul muhiim ah ku soo gaadhay.
Guusha Liverpool waxay ka dhigantahay in ay afar dhibcood hogaanka premier league ku sii qabtay waxayna fadhiga ku daawan doontaa kulanka Manchester City iyada oo kulankii 18 aad oo xiriir ah guuldaro la’aan ku sii jirta.